Etu ị ga - esi melite sava weebụ ma kwado web na GNU / Linux | Site na Linux
Etu ị ga - esi melite sava weebụ ma kwado web na GNU / Linux
Isaac | | GNU / Linux, Netwọk / Sava
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ etu ụfọdụ ga - esi ọrụ nnabata nke dị na ntanetị nwere ike ịnabata ibe weebụ ma ọ bụ ihe bụ sava weebụ yana otu o si arụ ọrụ, gụnyere gịnị bụ ogwe ndị na-egosi na URL nke ụfọdụ ibe weebụ, otu onye ahịa nwere ike isi jikọọ na ibe weebụ n'ụzọ dị anya, wdg., n'isiokwu a ga-eme ka o doo gị anya. M ga-akụziri gị ọ bụghị naanị echiche nke ihe nkesa bụ, ị ga-amarakwa otu esi emepụta sava weebụ gị site na nkwụsị site na nkuzi anyị dị mfe.
Taa, anyị niile na-eji ọrụ dị iche iche dị iche iche, yana igwe ojii na-atụgharị uche, mana ọ bụrụ na enwere ọrụ dị elu karịa ndị ọzọ, ikekwe ọ bụ nke ha na-enye sava weebụ, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ weebụsaịtị anyị na-eleta kwa ụbọchị iji gụọ akụkọ kachasị amasị anyị, lelee ozi ịntanetị sitere na ihu weebụ nke na-enye ụfọdụ ọrụ dịka GMail, mee azụmahịa, ọrụ, zụta ihe n'ịntanetị, wdg. Ọ dịghị onye na-agbanahụ ọrụ ndị a, nri? Agbanyeghị, maka ọtụtụ ndị ọrụ ya, ha amaghị dịka ihe dị n'azụ ha ...
2 Gịnị bụ ibe weebụ?
3 Kedu ka o si arụ ọrụ?
4 Nkuzi: wulite sava weebụ gi nkebi nkebi
5 Nabata weebụsaịtị gị na sava
Usersfọdụ ndị ọrụ na-eche nke ahụ ihe nkesa bụ ihe pụrụ iche, ihe dị nnọọ iche na nke ọ bụ n'ezie. Mana ekwuru na asụsụ dị mfe, sava abụghị naanị kọmputa dịka nke anyị nwere ike ịnwe n'ụlọ anyị, naanị na kama ịme dị ka onye ahịa, ọ na-eme ya dịka sava, ya bụ, ọ na-eweta ọrụ. I nwere ike iche na, n'ọnọdụ ahụ, gịnị kpatara onyonyo ndị ahụ anyị na-ahụ na TV ma ọ bụ na mgbasa ozi ndị ọzọ mgbe sava na-apụta dị obere ...
Ọfọn, ihe oyiyi ndị ahụ dị ka nke m tinyere ebe a bụ ihe oyiyi nke ugbo oru. Nke a bụ aha enyere usoro ụyọkọ kọmputa ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu sava. Buru n'uche na ọrụ ndị sava ndị a na-enyekarị bụ maka ọtụtụ narị, puku ma ọ bụ nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ndị ahịa na kọmputa ha, smartphones, mbadamba, smart TV, wdg. Yabụ, ikike ha ga-arụ dị elu karịa nke kọmputa kọmputa.
Naanị ị ga-eche banyere ọrụ dịka Twitter, ọtụtụ nde ndị ọrụ netwọkụ mmekọrịta a nwere, ọtụtụ faịlụ na ozi na-ebufe kwa nkeji ọ bụla. Ọ bụrụ n’iche maka ya, ọ bụ nnukwu dataYa mere, ọ bụghị dị irè na a njikọ dị ka onye anyị nwere n'ụlọ na a nkịtị kọmputa. Achọrọ njikọ dị ngwa ngwa ka ọ ghara igbu oge na ịnweta ndị ọrụ niile ahụ, ma nye ya ikike dị mkpa ka ha wee nwee ike ịnabata ozi niile ahụ.
Na nke a ihe m na-ekwu bụ na maka ọrụ a eji iri ma obu otutu komputa dị ka ndị anyị nwere ike iji n'ụlọ nke a na-etinye n'ime oche na racks. Ma nke bụ isi, nke ọ bụla n’ime ha adịghị anya na kọmputa desktọọpụ dị ka nke anyị nwere n’ụlọ anyị. Ma eleghị anya ụfọdụ nwere microprocessors pụrụ iche dịka AMD EPYC, Intel Xeon, wdg, ma eleghị anya, ha nwekwara ọtụtụ draịva siri ike ahazi dị ka RAID iji zere na ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ha adaa, ozi ahụ efuola, mana dịka m na-ekwu, debe na ha bụ kọmputa dị ka nke ị na-achịkwa ugbu a, m ga-agwa gị nke a n'ihi na ugbu a, m ga-akọwara gị otu esi eme PC gị ka ọ bụrụ ihe nkesa dị ala ...
N'ezie ndị a sava nwere ọtụtụ ụdị, enwere ndị na-enye ọrụ igwe ojii, dịka nchekwa, enwere ndị na-enye ọrụ email, sava weebụ, yana ụfọdụ na naanị ọrụ dịka DNS, NTP, DHCP, LDAP, wdg, ya bụ, ndị ikpeazụ niile dị oke dị mkpa ma jiri ha mee ihe kwa ụbọchị n'amaghị ama, ebe ọ bụ na ha bụ ọrụ ụfọdụ ISP (Onye Na-enye Ọrụ )ntanetị) ma ọ bụ ndị na-enye Internetntanetị na-enye anyị.
Gịnị bụ ibe weebụ?
Na nke a ga - ekwe omume, anyị nwere sava weebụ na - akwado ha, ya bụ, ọ na - echekwa data a niile na draịvụ ike ya, yana usoro usoro ntanetị dị ka Http (HyperText Nyefee Protocol) na HTTPS (Http na SSL / TLS akwụkwọ nche). Sọftụwia ga - elekọta nke a ka anyị ga - akuziri gị ma emechaa, ya bụ, iji mejuputa njikọ bidirectional maka onye ahịa yana na ọ nwere ike ịnyagharịa site na ọdịnaya hypertext, ya bụ, ụzọ ịkekọrịta, jikọta ma soro ozi emegharịrị na WWW (World Wide Web).
Kedu ka o si arụ ọrụ?
Ọ dị mma, anyị amatalarị ihe web na sava weebụ bụ, kọwaa n'ụzọ nke m yana asụsụ dị mfe ka mmadụ niile nwee ike ịghọta ya, ọbụlagodi ndị na-enweghị ihe ọmụma banyere teknụzụ a. Ma ugbu a, m na-aga n'ihu na ngalaba a nke m ga-anwa ime ka arụ ọrụ nke usoro ihe nkesa ahịa a. Mana maka nke a, na mbụ m ga-amata ọdịiche dị n'etiti abụọ:
Onye ahịa: onye ahịa bụ onye ọrụ na-enweta weebụsaịtị site na ngwaọrụ ha, ọ bụrụ laptọọpụ, desktọọpụ, mbadamba, smartphone, wdg. Maka ịnweta, ị chọrọ naanị njikọ Internetntanetị na ihe nchọgharị weebụ, sọftụwia dị ezigbo mkpa n'akụkụ ndị ahịa nke na-ahụ maka igosipụta ọdịnaya weebụ niile ahụ n'ụzọ enyi na enyi na ikwe ka onye ọrụ ahụ nwee mmekọrịta ya. Maka nke a, anyị ga-achọ adresị ibe weebụ ma ọ bụ IP naanị ... ka anyị gosi weebụsaịtị ndị a edepụtara, na ị ziri ezi.
Sava: Dịka anyị kọwara, ọ ga-ebu data niile na sọftụwia nke na-arụ ọrụ dịka sava, ya bụ, ọ na-enye onye ahịa ohere ijikọ ime ihe ọ bụla ha kwesiri ime. N'ihe banyere sava weebụ ọ ga-abụ, dịka ọmụmaatụ, Apache, Lighttpd, wdg.
Ọ ga-amasị m ịkọwa ihe ọzọ, ma ọ bụ na dịka ị maara nke ọma, Adreesị IP Ọ bụ nke na - achọpụta igwe ejikọrọ na netwọkụ, na nke a ọ ga - abụ IP nke sava weebụ. Enwere ụfọdụ ọrụ dị ka nke a nke ahụ na-egosi gị IP nke ibe kachasị amasị gị, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọọ google.es ọ ga-egosi gị IP kwekọrọ na sava ahụ ebe a na-akwado ọrụ a. Ọ bụrụ na ị nwaa itinye nọmba a na adreesị mmanya nke ihe nchọgharị weebụ gị, ị ga-ahụ na ma site na itinye www.google.es wee sị IP, n'ọnọdụ abụọ ọ ga-egosi Google.
Gịnị mere m ji kwuo ihe a? Ọfọn n'ihi na ọ na-enyere m aka ijikọ na Sava DNS. Sava ndị a bụ ọrụ ndị ọzọ nwere tebụl nwere aha weebụsaịtị na IP ha kwekọrọ, nke mere na mgbe mmadụ na-achọ adreesị site na aha ma ghara iji IP ahụ, ihe nkesa na-eme ka ihe nchọgharị ahụ gosipụta ọdịnaya nke weebụsaịtị ahụ. Emere nke a iji mee ka ọ bụrụ ihe omimi maka ụmụ mmadụ. Anyị enweghị ike icheta ọnụ ọgụgụ ndị ahụ niile ngwa ngwa, mana anyị nwere ike icheta aha weebụsaịtị anyị kachasị amasị anyị, nri?
Na njedebe m site na ịkọwapụta ihe bụ URL (Otu Onye Na-enye Ihe Nweta) ma ọ bụ edo ịchọta ebe, nke anyị na-ahụ na elu nke ụlọ mmanya anyị nchọgharị mgbe anyị nweta a website. Iji maa atụ, were ya na ị debanyere ngalaba myweb.es. N'okwu a, ngalaba ahụ ga-abụ nke gị ma ị nwere ike iji ya gosipụta ibe weebụ gị. Were ya na mmadụ na-enweta adreesị ahụ http://www.miweb.es/info/inicio.html#web:
http://: Na-egosi na anyị na-enweta iji usoro HTTP, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike ịbụ HTTPS, FTP, wdg. Mana na nke a ọ bụ nke mbụ, ya mere ọ bụ ọdịnaya weebụ.
WWW: ị maara na ọ sitere na Wide Web.
miweb.es: nke a bụ ngalaba ị debanyere aha, ya bụ, aha na-edochi IP nke ihe nkesa ma ọ bụ onye nnabata nke nwere ebe nrụọrụ weebụ gị. Ya mere, ọ ga - abụ aha na - achọpụta ihe nkesa ma ọ bụ igwe, mgbe niile ... Na mgbakwunye, ọ nwere TLD (Top Level Domain) nke na nke a bụ .es, iji chọpụta na ọ bụ weebụsaịtị sitere na Spain, ọ bụ ezie ọ nwere ike ịbụ .se si Sweden, .com si ụlọ ọrụ, .org Organization, wdg.
/info/inicio.html#web: nke a na - akọwa na enwetala ọdịnaya a, ya bụ, ndekọ ndekọ ozi yana n'ime ya bụ faịlụ home.html na hypertext yana ngalaba ahụ web. Ọ nwekwara ike ịbụ onyonyo, PDF, vidiyo, wdg. Dị ka ọ na-eme na njikwa faili gị mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ na draịvụ ike gị, nri?
Echere m na site na nke a, ezuru doro anya ọrụ kọwara n'ụzọ dị mfe.
Nkuzi: wulite sava weebụ gi nkebi nkebi
Ọ bụrụ na ị nwere GNU / Linux nkesa ọ bụlaI kwesịrị ịma na ozugbo ị hazi netwọkụ gị nke ọma, ebe ọ bụ na ịnweghị ike inwe IP dị ike, ọ ga-adịrịrị adapụ ma ọ bụ na ọ ga-agbanwe uru ya ma ọ ga-esi ike ịnweta web. Na mgbakwunye, ị kwesịrị ị paya ntị ma ọ bụrụ na ị nwere firewall ahaziri na iptables ma ọ bụ sọftụwia ndị ọzọ na enweghị iwu na-egbochi ịnyefe site na ọdụ ụgbọ mmiri 80 ma ọ bụ 8080, wdg, dị ka a ga - asị na ị nwere AppArmor ma ọ bụ SELinux, ha kwesịrị ikwe ka onye ọrụ ahụ daemon sava weebụ, na nke a Apache.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịwụnye ngwanrọ iji mejuputa sava weebụ anyị, na nke a Apache na ngwugwu ndị ọzọ iji mezue oriọna, edi ekeme ndidi efen. N'okwu m, site na Debian:
Mgbe ahụ i nwere ike hazie ụfọdụ kwa site na ihe nkesa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ma ọ bụ ikekwe ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ma ị nweta peeji nke m gosipụtara gị na foto gara aga, lee ndekọ ahụ n'ihi na ihe emehiela ... Site n'ụzọ, ị nwere ike ịhụ nke ahụ peeji nke site na ịnweta ihe nchọgharị weebụ gị na ịtọlite ​​localhost 127.0.0.1 .2 na adreesị adreesị ma ọ bụ IP static ị kwadoro maka sava gị. Ndabara ọdụ ụgbọ mmiri ga-abụ na /etc/apacheXNUMX/ports.conf bụrụ na ị chọrọ gbanwee ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nwekwara ike ịwụnye ọzọ agbakwunyere nchịkọta, ma ọ bụrụ na ị na-ezube ịnwe ihe nkesa ozi, ma ọ bụ ụfọdụ nhazi nhazi dịka phpAdmin, wdg.
Nabata weebụsaịtị gị na sava
Ozugbo anyị nwere ihe nkesa anyị njikere, cheta na PC ị raara nye ihe nkesa ga-adị mgbe niile ma jikọọ na netwọk ka web wee nwee ike ịnweta site na ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụghị na ihe nkesa ahụ ga-adị "ala". Ugbu a anyị nwere naanị lekọta weebụsaịtị anyị, na anyị nwere ike iji aka anyị mepụta ya n'onwe anyị site na iji HTML ma ọ bụ koodu ọzọ, ma ọ bụ jiri CMS dị ka WordPress nke na-eme ka ihe dịrị anyị mfe na anyị nwere ike ịnabata n'otu ebe ...
Maka nke a, anyị ga-eme ya n'ime na / var / www / html / ndekọ na ọ gwụla ma anyị gbanwere nhazi Apache, ọ ga-adị ebe a na-akwado webs. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwale obere ule site na iji PHP site na ịmepụta faịlụ na ọkacha mmasị gị ederede ederede na ọdịnaya:
Kpọọ ya test.php na ugbu a, mgbe ịmalitegharịrị apache2 daemon, ị ga-enwe ike ịhụ ma ọ nwere ike ịnweta ya site na ihe nchọgharị ahụ: 127.0.0.1/test.php.
Enwere m olileanya na nkuzi a enyerela gị aka ma na ị ga-amatacha nke ọma ka sava si arụ ọrụ, nke mere na ugbu a oge ọ bụla ị ga-abanye na blọgụ anyị ka ị gụọ ihe akụkọ, ị maara ihe niile dị n'azụ ya. Echefukwala ịhapụ gị comentarios, obi abụọ, ma ọ bụ aro, ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu ị ga - esi melite sava weebụ ma kwado web na GNU / Linux
Ndewo. You cheghị na iji PHP 5 na 2018 anaghị enwe isi?
Ee Taipe dijo
Abụ m onye mbido mgbe ọ bịara na sava.
Gịnị ip ka rawụta nwere?
Gịnị ip ga PC nke na-arụ ọrụ dị ka ihe nkesa nwere
Apache ihe ip ka o nwere?
Ndi ọha edozi ip?
Zaghachi Noe Taipe
Nnukwu kwenye Noe Taipe
Anọ m na-achọ ihe ọmụma ruo ọtụtụ izu iji melite ihe nkesa weebụ Linux na niile forums ha na-etinye «aghụghọ» na-arụ ọrụ na ntanetị ma ọ bụ mpaghara ma ana m eche na ihe mgbaru ọsọ gị bụ inwe ike ịtọ sava weebụ na mmadụ nwere ike ịhụ gị n'oge ọ bụla na kọmpụta ọzọ na mpụga netwọkụ gị n'obodo ọzọ, mba, ...
M jisiri ike mee ka sava weebụ hụ ya na netwọkụ dị na mpụga, na ọ bụrụ naanị na itinye IP m n'ihu ọha ma mepee ọdụ ụgbọ mmiri na rawụta m modem, m arụnyere Bind9, iji nwee ike ịkọwa ngalaba mepụtara na netwọkụ m na na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na netwọk m, mana enweghị m ike ịchọta ozi banyere otu esi eme otu ihe ahụ site na andntanetị na ndị mmadụ anaghị etinye IP m mana ngalaba mepụtara ka ha na-eme, google, mba ahụ, ụwa, ụlọ ikpe Bekee,… .
Ekele m na enwere m olile anya na ịchọta ozi gbasara ya.
1. Logiteckno dijo
M na-agbalikwa ịmụta otú e si melite ihe nkesa, mana ihe na-amasị m bụ otu esi edozi sava maka mmepụta ma enweghị m ike ịchọta ezigbo ozi.
Ọ bụrụ na ị dozighi nsogbu ị nwere, a na m adụ gị ọdụ ka ịmepụta akaụntụ na noip.com. Mepụtara ngalaba na - akwụghị ụgwọ, tinye ip ọha ma hazie DDNS na modem gị. M na-ahapụrụ gị njikọ: https://www.youtube.com/watch?v=6ijBQhn06CA
Daalụ maka onyinye ahụ, m wụnye sava LEMP na ekele na blọọgụ m enweelarị echiche otu esi etinye akwụkwọ ibe WEB m, ugbu a mụta obere PHP ma ọ bụ HTML, nke ọ bụla dị mfe ma dị n'ihu.
Nyere gị okwu mmeghe, were ya na ị ga - eme usoro nkuzi ọfụma maka ndị na - enweghị uche dịka m….
Zaghachi Fabian Ariel Wolf
Diego onyekwere dijo
O jeere m ozi nke ọma, daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Diego Ramos
Ezigbo ihe nkuzi a ...
Zaghachi Miguel Angel Silva
Ọhụrụ nke distro ọdụ 3.9 na mmelite ọhụrụ dị ugbu a
Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition dị ebe a, melite ugbu a